သူမရဲ့ beautybynaychi ပေ့ခ်ျ လေးဖြစ်လာအောင် နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးစားပံ့ပိုးပေးတဲ့ သူတွေကို နှစ်ပတ်လည် ညစာစားပွဲ ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး – Cele Posts
တစ်နိုင်ငံလုံးက လူကြီး၊ လူငယ် ပရိသတ်မရွေး သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ နေခြည်ဦး ကတော့ beautybynaychi ဆိုတဲ့ ပေ့ခ်ျလေးကနေ တဆင့် Beauty Blogger အဖြစ် စတင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ရှိလာ ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလောက ထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့တာ နှစ်အနည်းငယ်သာ ရှိသေးပေမယ့် အသစ်တစ်ယောက် နဲ့မတူအောင် ကြိုးစားခဲ့မှုကြောင့် အခုဆိုရင် ပရိသတ်လက်ခံ အားပေးမှုကိုလည်း အများကြီးရရှိခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်ဦး ကတော့ အခုဆိုရင် ထိပ်ဆုံးနေရာ တစ်နေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီ ဆိုပေမယ့် သူမရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေကိုတော့ လုံးဝလျော့မသွားပဲ အသစ် အသစ်သော အကြောင်း အရာတွေနဲ့ ပရိသတ်ကို တင်ဆက်ဖို့ ကြိုးစား နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နေခြည်ဦးဆိုတဲ့ အောင်မြင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့ သူတွေထဲမှာ beautybynaychi အဖွဲ့သားတွေ အားလုံးလည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေကို ဝန်ထမ်းလို့ သဘောမထားပဲ မိသားစုသူငယ်ချင်းလို ဆက်ဆံတတ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က ဒီဇင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့မှာတော့ နေခြည်ဦးက သူမရဲ့ beautybynaychi အဖွဲ့သားတွေ အားလုံးအတွက် (၃) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် ညစာစားပွဲ ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး “နေခြည်ဦးဆိုတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့နောက်ကွယ်က အဓိက ပဲ့ကိုင်ရှင်များနဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းများ Happy three years team beautybynaychi !! I love my chilliesss 🌶🌶🥰🥰🥰” ဆိုပြီး သူမရဲ့ အပျော်တွေကို မျှဝေပေးလာပါတယ်။
နေခြည်ဦး ကတော့ သူမကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ သရုပ်ဆောာင်၊ Social Influencer တစ်ယောက်ဖြစ် လာဖို့ နောက်ကွယ်ကနေ ပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ အဖွဲ့သား တွေကို စားသောက်ဆိုင်အကောင်းစား ကြီးမှာ ဂုဏ်ပြုညစာ ကျွေးမွေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်ဦးနဲ့တကွ beautybynaychi ကုမ္ပဏီကြီး အဓွန့်ရှည် အောင်မြင်ပါစေနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
သူမရဲ့ beautybynaychi ပခြေျ့ လေးဖွဈလာအောငျ နောကျကှယျကနေ ကွိုးစားပံ့ပိုးပေးတဲ့ သူတှကေို နှဈပတျလညျ ညစာစားပှဲ ကငျြးပပေးခဲ့တဲ့ နခွေညျဦး
တဈနိုငျငံလုံးက လူကွီး၊ လူငယျ ပရိသတျမရှေး သိပွီးသားဖွဈတဲ့ နခွေညျဦး ကတော့ beautybynaychi ဆိုတဲ့ ပခြေျ့လေးကနေ တဆငျ့ Beauty Blogger အဖွဈ စတငျခဲ့ပွီး အောငျမွငျတဲ့ လမျးကွောငျးပျေါ ရောကျရှိလာ ခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာလညျး သရုပျဆောငျ တဈယောကျအဖွဈ အနုပညာလောက ထဲကို ဝငျရောကျလာခဲ့တာ နှဈအနညျးငယျသာ ရှိသေးပမေယျ့ အသဈတဈယောကျ နဲ့မတူအောငျ ကွိုးစားခဲ့မှုကွောငျ့ အခုဆိုရငျ ပရိသတျလကျခံ အားပေးမှုကိုလညျး အမြားကွီးရရှိခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ နခွေညျဦး ကတော့ အခုဆိုရငျ ထိပျဆုံးနရော တဈနရောမှာ ရပျတညျနပွေီ ဆိုပမေယျ့ သူမရဲ့ ကွိုးစားမှုတှကေိုတော့ လုံးဝလြော့မသှားပဲ အသဈ အသဈသော အကွောငျး အရာတှနေဲ့ ပရိသတျကို တငျဆကျဖို့ ကွိုးစား နတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
နခွေညျဦးဆိုတဲ့ အောငျမွငျသူ တဈယောကျဖွဈလာဖို့ ကွိုးစားပေးခဲ့တဲ့ သူတှထေဲမှာ beautybynaychi အဖှဲ့သားတှေ အားလုံးလညျး အပါအဝငျဖွဈပါတယျ။ လုပျဖျောကိုငျဖကျ တှကေို ဝနျထမျးလို့ သဘောမထားပဲ မိသားစုသူငယျခငျြးလို ဆကျဆံတတျသူ တဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ မနကေ့ ဒီဇငျဘာလ (၂၈) ရကျနမှေ့ာတော့ နခွေညျဦးက သူမရဲ့ beautybynaychi အဖှဲ့သားတှေ အားလုံးအတှကျ (၃) နှဈပွညျ့ နှဈပတျလညျ ညစာစားပှဲ ကငျြးပပေးခဲ့ပွီး “နခွေညျဦးဆိုတဲ့ ကောငျမလေးရဲ့နောကျကှယျက အဓိက ပဲ့ကိုငျရှငျမြားနဲ့ အခဈြဆုံး သူငယျခငျြးမြား Happy three years team beautybynaychi !! I love my chilliesss 🌶🌶🥰🥰🥰” ဆိုပွီး သူမရဲ့ အပြျောတှကေို မြှဝပေေးလာပါတယျ။
နခွေညျဦး ကတော့ သူမကို ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ သရုပျဆောာငျ၊ Social Influencer တဈယောကျဖွဈ လာဖို့ နောကျကှယျကနေ ပံ့ပိုးပေးကွတဲ့ အဖှဲ့သား တှကေို စားသောကျဆိုငျအကောငျးစား ကွီးမှာ ဂုဏျပွုညစာ ကြှေးမှေးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ နခွေညျဦးနဲ့တကှ beautybynaychi ကုမ်ပဏီကွီး အဓှနျ့ရှညျ အောငျမွငျပါစနေျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျ။